Chateau de भिन्सेन्नस: इतिहास र फोटो
प्राचीन वास्तुकला प्रेम, फ्रान्सेली प्रशंसक र इतिहास प्रेमीहरूलाई को Chateau de भिन्सेन्नस भ्रमण गर्ने अवसर सम्झना हुँदैन - दरबार, जो छैन एक अर्को पेरिस समान, तर यो शाही रहस्य धेरै रहन्छ। के फरक छ छ वास्तु संरचना बाँकी देखि, धेरै माग्छ। अन्य फ्रान्सेली chateaux, यस्तो मनोरम र यसको प्रकटीकरण कोमल संग तुलना मा, बोइस डी भिन्सेन्नस, अर्कोतर्फ, धेरै, उदास पनि menacing देखिन्छ। अचम्मको छैन, यो साँच्चै कठोर कथा छ किनभने।
ठाँउ भिन्सेन्नस क्यासल
किल्ला, पेरिस को उपनगर मा स्थित छ जो, बारी मा, मेट्रो स्टेशन Chateau de भिन्सेन्नस र 8 किमी दक्षिण-पूर्वी 300 मिटर पश्चिम छ भिन्सेन्नस, को आबादी क्षेत्रमा Ile डे ला Cité। यसलाई अन्य भिन्सेन्नस महल गर्न विपरीत मा एक सपाट क्षेत्र मा निर्मित थियो विचारणीय छ। कुनै नजिकका नदी थियो किनकी, क्रीक भरिएको कि शत्रु सेना को प्रवेश गर्न बाधा रूपमा सेवा जो एक moat। मध्य युग मा यो स्थान मा, एक वन हुआ गढ रूखहरू सबै पक्षलाई घेरिएको थियो भनेर। यो दिन उहाँले लगभग बाँच्न थिएन।
महल को विवरण
यो तीन राउन्ड कुना टावर एक वर्ग मा erected को Keep6मिटर ramparts wherein व्यास अनियमित आयत को फारम, एक विशाल किल्ला प्रतिनिधित्व गर्दछ। सबै ढाकिएको हेर्ने ग्यालरी सुसज्जित छन्। Chateau de भिन्सेन्नस impregnable।3मिटर को यो भारी महल पर्खाल मोटाई र लगभग 12 पूर्ण संवाददाता तहखाने को एक उचाइ। यी आयाम खातामा पिट को गहिराई लिएर बिना दिइन्छ।6फर्श को कुल, तर यो मात्र 5, उत्तरार्द्ध अरु को सम्बन्ध मा धेरै सानो छ किनभने छ। तर वरपरको क्षेत्र को एक सुन्दर दृश्य छ।
सुरुमा यो गढ पर्खाल को टावर धेरै उच्च थियो, तर पछि ध्वंस छन्। र यस्तो संरचना मा आधुनिक पल्ट बाँचे छ। मेरुदण्ड एक प्रकारको जो सबै पाँच फर्श को Vaults पकड छ Keep, एक स्तम्भ हो। अपेक्षाकृत हालै, त्यो संरचना संक्षिप्त धम्की जो बिना बलियो गर्न पुनर्निर्माण, बाँचे। यो किले को भित्री पर्खाल मा एक पटक चित्रित थियो कल्पित छ।
Chateau de भिन्सेन्नस: घटना को इतिहास
यसलाई जो आज देख्न सकिन्छ छैनन् भनेर सुविधाहरु, निर्माण र XII शताब्दीको बीचमा लुइस VII (युवा) को आदेश बनाइएको थियो कि एउटा सानो शिकार लजको संग किले को "जीवन" सुरु हुन्छ। छैन अचम्मको कुरा, राजा मध्य युग मा त्यहाँ खेल वन को धनी, सुन्दर थियो, यो ठाउँ छनौट गरे। त्यसपछि XIII शताब्दीमा पहिले नै थियो कि महल, त्यहाँ थियो जब फिलिप अगस्तस र अधिकार सेन्ट लुइस। तपाईं कथा डुबाउनुहोस् भने, तपाईं यो किल्ला देखि यो थियो कि पाउनुहुन्छ फ्रान्स राजा क्रस, त्यो कहाँ फर्के कहिल्यै देखि - आफ्नो अन्तिम अभियान गए।
को XIV शताब्दीमा Chateau de भिन्सेन्नस नजिक विशेष घटनाहरू लागि स्थल रूपमा प्रयोग भएको थियो। उदाहरणका लागि, यहाँ फिलिप III, पछि साथै 10 वर्ष, 1284 मा, र फिलिप चतुर्थ विवाह गरे। तर Solemn घटनाहरू मात्र यहाँ आयोजित। पछि फिलिप वी र अझै पनि, समय को नै रकम - - 1316 मा महल6वर्ष पछि, मृत्यु, लुई एक्स चार्ल्स चतुर्थ।
तर गढ - अमर छ। र पहिले नै 1337 मा, Korol Filipp चतुर्थ के निर्मित भइरहेको छ कालकोठरी गर्न एक दृश्य संग बलियो बनाउन आवश्यकता क्रम, पछि यसको भित्ताहरू सुरक्षित दिन्छ। लक कार्ल वी जन्म (बुद्धिमानी) त्यहाँ छ टावर र तीन ढोकाहरू एक किलोमिटर भन्दा बलियो पर्खाल लम्बाइ छ जो संग जडान एउटा निजी निवास को निर्माण, गरेर substantiated छ। तर यस्तो परियोजना चाँडै कार्यान्वयन हुन सकेनन्, र निर्माण देखि दुई पुस्तामा लामो थियो। त्यसपछि आफ्नै पवित्र मण्डप को निर्माण र अर्को शासक, लुई क्सी सुरु, पर्खाल स्थित भवन मा तहखाने देखि सारियो।
लुइस XIV अझ भयो - यो architect डिजाइन2पखेटा, एक अगाडि यार्ड जोडिएको आदेश दिए। दुवै एक शास्त्रीय शैलीमा सजाया थिए, तर एक रानी गर्न belonged, र अन्य - राजा। त्यसपछि Chateau de भिन्सेन्नस (पेरिस) तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निवास थियो, तर पहिले नै 1670 का रवि राजा मा भर्साइल्लेज सारियो। भिन्सेन्नस मा फोर्ट यसको व्यक्तिको पेशा गुमाए।
वर्तमान दिन आफ्नो अस्तित्व नै महल को भाग्य
उहाँले लुइस XIV को गढ बस्थे गर्दा पनि, कालकोठरी राज्य जेल भयो, तर सरल छैन, र महान जन्म कैदी लागि। तिनीहरूलाई केही महल सेवक र पत्नीहरू तिनीहरूलाई साथ पूरा गर्न अनुमति थिए, त्यसैले कैदी को आवास आरामदायक भन्दा बढि भनिन्छ सकिएन। उदाहरणका लागि, त्यहाँ अब आफ्नो अवधि चिरपरिचित दार्शनिक र कवि VOLTAIRE र मार्क्युज डे Sade brawler सेवा छ।
सूर्य राजा भर्साइल्लेज सारियो गर्दा कालकोठरी जेल को XVIII सताब्दी त्यहाँ बरतन को उत्पादन को लागि एक कारखाना बसे पनि पछि जारी राखे। जो यो ठाउँ घटनाहरू मा धनी को इतिहास थाले लज, को शस्त्रागार मा महल को परिवर्तन पछि मात्र 1796 मा अवस्थित गर्न ceases। त्यतिबेला हामी सैन्य उद्देश्यका लागि सुविधाहरु को एक किसिम देखा पर्न थाले। खैर, तिनीहरूले भवन राम्रो संरक्षित छन् र नष्ट गरिएको छैन रूपमा, आज देख्न सकिन्छ।
1804 मा गढ रक्तपातपूर्ण घटनाहरू हेर्दै को moat - Enghien ड्यूक - नेपोलियन को आदेश मा त्यहाँ, राजकुमार डे CONDE Bourbon मात्र छोरा गोली थियो। र 1917 मा एउटै ठाउँमा मेरो जीवन कुख्यात Mata हरि विदाई बताए। आज, Chateau de भिन्सेन्नस, जो एक फोटो लेख देखाएका - यो भ्रमण इच्छा गर्ने सबैलाई खुला छ कि एक संग्रहालय छ।
को भिन्सेन्नस महल इलाका
एक पटक बाक्लो थिए वन बाट, त्यहाँ मात्र एउटा सानो टुक्रा थियो। को राख्न साथै, पवित्र मण्डप र सैन्य भवन अहिले अनुसन्धान र अभिलेख केन्द्र को क्षेत्र मा हो:
रक्षा मन्त्रालय को ऐतिहासिक सेवा।
राष्ट्रीय रक्षा को इतिहास को लागि अनुसन्धान केन्द्र।
Interministerial समिति, पुनर्स्थापना काम टाउको।
Chateau de भिन्सेन्नस: त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने?
सजिलो तरिका - यो मेट्रो। RER - स्टेशन भिन्सेन्नस, वा पेरिस मेट्रो को पहिलो शाखा - स्टेशन Chateau de भिन्सेन्नस। को feudal महल, फ्रान्सेली राजा र काठ घर को निवास - एक वास्तुकला सिर्जना, बाहिर बाट unremarkable, तर एक विशाल ऐतिहासिक मूल्य छ। आखिर, यहाँ म जन्मेको थियो, भयो, र फ्रान्सेली शासक मध्ययुगीन समय को एक पुस्ता zhenilos मृत्यु भयो। Chateau de भिन्सेन्नस, पर्यटक बस खुसी, साँच्चै लायक एक रूप Louvre वा धेरै यात्रा छोड्न समीक्षा जो "Stade डे फ्रान्स"।
देश कम्प्लेक्स "Dubrava" (पार्क होटल) समारा मा: विवरण, फोटो, समीक्षा
एम्स्टर्डम देखि एक उपहार रूपमा के ल्याउन?
रेड गेट मा पौष्टिक स्टालिन स्क्रीस्पर
EuroStar Jomtien बीच होटल र स्पा3*: होटल समीक्षा
वायु सेना मेजर जनरल अलेक्जेन्डर Fedotov - परीक्षण पायलट नम्बर 1